Izindaba Ezimbi Eziningi Ngoju Njengoba i-US Ifuna Ukubanjwa Kwezinsalela zeGlyphosate Ekudla - Ilungelo Lase-US Lokwazi
Izindaba Ezimbi Eziningi Ngoju Njengoba i-US Ifuna Ukutholwa Kuzinsalela ZeGlyphosate Ekudlaleni
Posted on November 3, 2016 by UCarey Gillam
Ukuhlolwa kwezinsalela zemithi ebulala ukhula eyenziwe yiMonsanto Co exhunyaniswe nomdlavuza kukhuphuke amazinga aphezulu oju oluvela esifundazweni esiyinhloko sase-Iowa, okunezela ekukhathazekeni ngokungcoliswa kwe-herbicide okudale okungenani amacala amabili abhekene nabadlali bemboni yezinyosi futhi kucelwe ukuhlolwa ngabalawuli.
Ukuphathwa Kwezokudla Nezidakamizwa kwaqala ukuhlolwa kwezinsalela ze-glyphosate enanini elincane lokudla ekuqaleni konyaka ngemuva kwe-International Agency for Research on Cancer i-glyphosate ehlukanisiwe njenge-carcinogen yabantu ngoMashi 2015. “Umsebenzi obalulekile,” njengoba i-FDA ibhekisa kuphrojekthi yokuhlola, kungokokuqala ukuthi i-FDA ibheke izinsalela ze-glyphosate ekudleni, yize ihlola ukudla minyaka yonke kweminye imishanguzo yokubulala izinambuzane.
Ucwaningo ngu-FDA chemist uNarong Chamkasem noJohn Vargo, usokhemisi eNyuvesi yase-Iowa, kukhombisa ukuthi izinsalela ze-glyphosate - isithako esiyinhloko se-Roundup herbicide kaMonsanto - itholakale ezingxenyeni ezingama-653 ngezigidigidi, ngaphezu kokuphindwe kayishumi umkhawulo ka-10 ppb ovunyelwe e-European Union. Amanye amasampuli ahlolwe athola izinsalela ze-glyphosate kumasampuli ezinyosi emazingeni kusuka kuma-50s aphb aphansi kuya ezingxenyeni ezingaphezu kwezingu-20 ngebhiliyoni ngalinye pb. Amanye amasampula ayengenawo noma alandelela amanani angaphansi kwamazinga we-quantification. Imibiko edlule wayedalule izinsalela ze-glyphosate kuju olutholwe lufinyelela ku-107 ppb. Umsebenzi wokubambisana wawuyingxenye yomzamo ngaphakathi kwe-FDA ukusungula nokuqinisekisa indlela yokuhlola yezinsalela ze-glyphosate.
"Ngokwemibiko yakamuva, kube nokwanda okumangazayo ekusetshenzisweni kwale mibulali yokubulala ukhula, okuyingozi empilweni yomuntu nakwezemvelo," kusho uCamkasem noVargo encwadini yabo yaselebhu.
Ngoba alikho izinga lokubekezela elisemthethweni le-glyphosate elujuweni e-United States, noma yiliphi inani lingabhekwa njengokwephula umthetho, ngokwezitatimende yenziwe kuma-imeyili angaphakathi e-FDA, atholakala ngezicelo ze-Freedom of Information Act (FOIA).
I-Ejensi Yokuvikelwa Kwezemvelo kungekudala izothutha ukusetha ukubekezelelana, noma kunjalo. I-ejensi ibeke amazinga okubekezelela izinsalela ze-glyphosate ekudleni okuningi i-EPA elindele ukuthi ingaqukatha izinsalela zombulali wokhula. Lapho amazinga wezinsalela etholwa ngaphezu kwamazinga okubekezelelana, izinyathelo zokuphoqelela zingenziwa kumkhiqizi wokudla.
"I-EPA ihlola isidingo sokusungula ukubekezelela izinsalela ezingazazi zemithi yokubulala izinambuzane ezikuju," kusho le nhlangano esitatimendeni. I-EPA iphinde yathi asikho isizathu sokuthi abathengi bakhathazeke ngensalela eseju. "I-EPA ihlolisise amazinga ezinsalela ze-glyphosate atholakala kuju futhi inqume ukuthi izinsalela ze-glyphosate kulawo mazinga azikhulisi ukukhathazeka kwabathengi," kusho le nhlangano.
Ngaphandle kokuqinisekiswa, okungenani kufakwe amacala amabili ngale nkinga. I-Organic Consumers Association neqembu elingenzi nzuzo le-Beyond Pesticides icala elifakwe kuNovemba 1 ngokumelene neSioux Honey Association Cooperative, iqembu elikhulu elizinze e-Iowa labafuyi bezinyosi abakhiqiza umkhiqizo owaziwa kuzwelonke iSue Bee Honey. Izindleko zeSue Bee uqobo lwazo zithi "Uluju lwaseMelika," kepha icala limangalela ukuthi ukufakwa ilebula nokukhangiswa kweSue Bee Products njenge- "Pure," "100% Pure," "Natural," ne- "All-natural" "kungamanga, kuyadukisa, nenkohliso. ” Ezinye izinsalela ze-glyphosate ezitholwe ezivivinyweni ze-FDA zitholakale kuhlobo lweSue Bee, ngokusho kuka imibhalo ye-FDA etholwe ngezicelo ze-FOIA
Izimangalo ziyefana elinye icala, efuna isikhundla sesigaba, esafakwa kuSioux Honey Association ngasekupheleni kukaSepthemba eNkantolo yesiFunda sase-US esiFundeni saseMpumalanga saseNew York.
UQuaker Oats wamangalelwa ekuqaleni kwalo nyaka ngesimangalo esifanayo maqondana nezinsalela ze-glyphosate. I-FDA nayo kutholwe izinsalela ze-glyphosate ku-oatmeal, kufaka phakathi izinhlobo eziningana zokusanhlamvu kwe-oat yezinsana.
Ukucabangela ummbila yisitshalo esiyinhloko esitshalwe e-Iowa, futhi iningi lesitshalo sommbila wase-US silungiswa ngokwezakhi zofuzo ukubekezelela ukufafazwa ngqo nge-glyphosate, akumangazi ukuthi izinsalela ze-glyphosate zikhombisa uju e-Iowa nakwezinye izifunda zepulazi. Izinyosi zezinyosi ngokwemvelo ziyahamba ziye ensimini ziye ensimini futhi zitshale ukutshala, ngakho-ke zingangcoliswa i-pesticide kalula bese zidlulisela izinsalela ze-pesticine kuju lwazo, ngokusho kwabaholi bemboni yezinyosi.
"Ukungena kwamakhemikhali, ukungena kwamakhemikhali emikhiqizweni yethu," kusho uDarren Cox, umongameli we-American Honey Producers Association. “Asinayo nhlobo indlela yokuyilawula. Angiyiboni indawo yokuthi sibeke izinyosi zethu. Asikwazi ukuwafaka phakathi nogwadule. Badinga ukuthi bakwazi ukuklaba ezindaweni ze-ag. Azikho izindawo ze-ag ezingenawo lo mkhiqizo. ”
UMengameli weSioux Honey Association uDavid Allibone uthe akekho noyedwa we-FDA oke waxhumana neqembu lakhe mayelana nezinsalela zamakhemikhali ezitholakala kuzinyosi, wathi ngeke esakwazi ukuqhubeka nokuxoxa ngalolu daba ngenxa yamacala abekwe wona.
Icala elifakwe ngoLwesibili livuma ubunzima ababhekene nabo abafuyi bezinyosi. Ngokuvamile “baba yizisulu zokungcoliswa yizifuba zabo, futhi abanalo usizo oluncane olubangelwa ukusetshenziswa kwezibulala-zinambuzane emasimini lapho kudla khona izinyosi,” kusho icala.
Izinsalela ze-glyphosate ezibonakala ekudleni ziyamangaza futhi ziyakhathaza, ngokusho kwesazi sokudla uMitzi Dulan, uchwepheshe owaziwa kuzwelonke wezempilo nokuphila kahle.
"Ngicabanga ukuthi kufanele kwenziwe olunye uvivinyo ukuze sihlome ngolwazi bese sinquma ukuthi yini esifuna ukuyifaka emzimbeni wethu," kusho uDulan. "Ngiyakholelwa ekunciphiseni ukuchayeka kwezibulala-zinambuzane uma kungenzeka."
UJay Feldman, umqondisi omkhulu weBeyond Pesticides, ummangali ecaleni elifakwe ngoLwesibili, uthe abalawuli kudingeka benze okuningi ukubhekana nale nkinga.
"Kuze kube yilapho izinhlaka ezilawula i-US zivimbela iMonsanto nabanye abakhiqizi be-glyphosate ekuthengiseni ama-pesticides agcina ekutholakaleni kokudla, sidinga ukuvikela abathengi ngokufuna iqiniso nokuba sobala ekubhaleni," kusho uFeldman.
Ukudla Okucatshangwayo, izibulala-zinambuzane FDA, Ukudla, glyphosate, Uju, Monsanto